MINISTERAN’NY FITONDRANA AM-BAVAKA - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »MINISTERAN’NY FITONDRANA AM-BAVAKA
MINISTERAN’NY FITONDRANA AM-BAVAKA
(Ministère de l’intercession)
Toy ny fianakaviam-be iray ny karismatika, toy ny vatana « mistika » izay isehoan’ny karazam-panomezam-pahasoavana marobe. Anisan’ireo fanomezan’Andriamanitra ho an’ny Fiangonany ny fitondrana am-bavaka. Ny fototr’ity fitondrana am-bavaka ity dia ny fivavahana amim-paharetana. Ny vahoakan’Andriamanitra dia vahoaka mivavaka sy midera azy Tompony. Noho izany, ny fahasoavana fototra zarain’ny karismatika amin’ny olona amin’ny alalan’ity ministera ity dia ny fivavahana, ny hafanam-po mivavaka ary ny fitiavam-bavaka. Ny tena karismatika dia ny olona mivavaka ary mahay mampivavaka ny hafa.
Nanomboka tamin’ny taona 2006, dia nahatsiaro isika fa tokony hapetraka sy zaraina araka ny fanomezam-pahasoavana ananany ny olona tsirairay avy. Izany no nahatonga ny fizarana ny ministera enina (6). Ministera izay mandrafitra sy maneho ny maha-karismatika antsika. Isan’ireo ministera ireo ny fitondrana am-bavaka. Izany no antony handalinantsika ity ministera ity mba hitovy ny fomba fijery ankehitriny sy ny amin’ny ho avy. Ny fiainana sy ny iraka ampanaovina antsika karismatika dia mifototra indrindra amin’ny fahasoavana. Ny fototr’io fahasoavana io dia ny fivavahana amin’ny Fanahy sy fahamarinana. Ireo no fototra ahazoantsika izay ilaintsika sy ho an’ny Fiangonana ary ho an’ny fikambanantsika.
Misy ny fototra ara-tsoratra masina iorenan’ity ministera ity ao anaty baiboly fa nofidiko manokana i Moizy mba ho ohatra ho antsika amin’ity ministeran’ny fitondrana am-bavaka ity. Arakaraky ny faharetany nanandratra ny tanany nivavaka nandritra ny ady nataony tamin’ny Hamalekita no nandresen’ny tafika jody. Rehefa reraka kosa izy ka nidina ny tanany dia mahazo hery ny tafiky ny Hamalekita. Koa vakio sy diniho tsara ity ohatr’i Moizy ity mba ho tonga Moizy faharoa isika (Eksaody 17, 8-16), mba ho tonga Maria faharoa koa isika izay nifidy ny anjara tsara indrindra (Lioka 10, 38-42).
Araka ny fahazoako ny andraikitry ny olona ao anatin’ny ministera fitondrana am-bavaka noho izany dia toy izao manaraka izao :
Voalohany ny andraikitry ny mpitondra am-bavaka dia « ad-intra » izany hoe natao ho antsika samy isika ato anaty fikambanana aloha voalohany indrindra. Raha adika tsotsotra : ny vavaka izay atao ao anatin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka dia natao indrindra mba hankahery antsika samy karismatika, mba hahery ara-panahy isika tsirairay avy, ary hahazo ny fahasoavana ilaintsika ao anatin’ity fikambanana karismatika ity. Atao ny vavaka mba hitombo fahamasinana sy fitiavana isika, mba hihamaro sy hatanjaka ny fanomezam-pahasoavana ao anatin’ny fikambanana, ary koa mba hihamafy ny fahatokisantsika ny Fanahy Masina ka hanaovantsika mandrakariva ny sitrapony.
Manarak’izay dia tena iraka « ad-extra » izy ity : Ny tetsy aloha dia natao ho an’ny tsirairay isam-batan’olona ity ministera ity. Etoana kosa dia misokatra ho an’ny iray fikambanana manontolo. Noho izany ity fitondrana am-bavaka ity dia mankahery sy manamafy ny iraka sy ny asa anirahana ny fihavaozana karismatika. Vokatr’izay, dia maro tsy tambo isaina ireo zavatra tokony ho entina am-bavaka ho an’izay ao amin’ity ministera ity. Tiako nefa ny manisy tsindrim-peo etoana fa ny kendren’ity ministera ity voalohany indrindra dia ny ara-panahy. Izany hoe tokony hanamafy sy hanamora ny iraka ampanaovina ny fihavaozana aloha voalohany indrindra no zavatra angatahintsika. « Ho tonga anie ny fanjakanao… » « Ary koa mba ho tonga eo amintsika ny pantekôty vaovao ho an’ny Fiangonana maneran-tany, ho an’ny Fiangonana eto Madagasikara ary ho an’izao tontolo izao.» Raha izay no vintatsika dia mangady lalina ny loharanom-pahasoavan’ny pantekôty vaovao isika. Izany no fototra iorenan’ny fitondrana am-bavaka eo anivon’ny Fihavaozana Karismatika « Fiombonana » eto Madagasikara.
Ny fidirana ao anatin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka dia zavatra matotra. Noho izany, dia tsy maintsy mandanjalanja aho raha manana ny fahafahana manao izany ary koa manana ny fotoana anaovana izany. Ny tokony hataontsika dia ny mampitaha ny ataontsika amin’ireo fikambanan-drelijiozy mpimbanjina eo anivon’ny Fiangonana : Fiambenana masina ara-panahy mba ho an’ny asam-pamonjena tanterahin’ny Fiangonana sy ny fihavaozany.
Ity iraka ity dia ady ara-panahy sy fiarovana amin’ny asan’ny ratsy izay mitady hanimba ny iraka ampanaovina ny Fiangonana sy ny fikambanantsika. Atao izany na dia mifanalavitra aza ny toerana misy antsika mba tsy ho simban’ny ratsy ny iraka ampanaovina antsika sy ny fiombonantsika. Amin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka, dia manao ny vavaka fanafahana manohitra ny demony sy ny forongony isika. Noho izany dia takiana ary tsy maintsy atao izany fandroahana izany. Ohatra : atao isan’andro ny vavaka atao amin’ny alalan’ny Misely Arakanjely.
Ireto no zavatra tokony hataontsika voalohany amin’ny fitondrana am-bavaka :
Ny fangatahana ara-panahy izay mikatsaka ny famonjena ny olona mba hibebahany sy mba hanamasinany ny tenany.
Ny fangatahana ho an’ny fiainam-piangonana sy ny iraka ampanaovina azy (Na ho an’ny Fiangonana maneran-tany, na ho an’ny Fiangonana eto an-toerana, ny fangatahana ampanaovin’ny Papa isam-bolana (fangatahan’ny apostolà), ny vavaka ho an’ny misiona sy ny misionera).
Ny fitondrana am-bavaka ny Fihavaozana isan’ambaratonga : ho an’ny foibe nasionaly, ho an’ny diosezy, ho an’ny isam-piangonana, ho an’ny isaky ny vondrona na gropy ary ho an’ny tsirairay mpikambana.
Entina am-bavaka ihany koa ny ady ataon’ny ministeran’ ny fanasitranana sy ny fanafahana sy ny ministera hafa…
Noho izany dia tsy tokony ho ny zavatra ara-materialy be no hibahana ao anatin’ny fitondrana am-bavaka, satria izany dia mandrisika antsika hifikitra amin’ny zavatry ny tany. Tokony hotsaroantsika mandrakariva ny tenin’i Jesoa hoe : « Inona no soa azon’ny olona raha very ny fanahiny ? ». Izany akory tsy midika hoe tsy hitondra am-bavaka ny momba ny fiainantsika ara-materialy isika, fa kosa tsy maintsy asiana fandanjalanjana araka ny hanentanan’ny Fanahy. Eny na i Jesoa ary raha nampianatra antsika hivavaka dia nanao hoe : « Omeo anay anio ny haninay isan’andro ». Anjaran’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga (nasionaly, diosezy, gropy) amin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka no mandanjalanja sy mandahatra izay zavatra tokony ho entina am-bavaka, isan’andro na isan-kerinandro na isam-bolana. Amafisiko ihany fa ny iraka fototra ho an’ity ministeran’ny fitondrana am-bavaka ity dia ny ady hahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra.
Indreto ary misy ohatra vitsivitsy azontsika arahina :
ALATSINAINY : vavaka fanomezam-boninahitra ny Fanahy Masina, vavaka ho an’ny fihavaozana sy ny iraka ampanaovina azy eto Madagasikara sy eran’izao tontolo izao.
TALATA : fitondrana am-bavaka ireo rehetra marary mitady fahafahana sy fanasitranana nangata-bavaka tamintsika nandritra ny herinandro.
AlAROBIA : ho an’ireo rehetra tsy vita Batemy, ho an’ny firaisan’ny mpino, ho an’ny iraka ampanaovina ny Fiangonana eran’izao tontolo izao.
ALAKAMISY : ho an’ny Papa, ny Eveka, ny pretra, ho an’ny relijiozy lahy sy vavy rehetra, ho an’ireo mpiofana ho pretra na relijiozy, ho an’ny fiantsoan’Andriamanitra, hoan’ny katesista sy ireo rehetra manana andraikitra ao amin’ny Fiangonana.
ZOMA : ho an’ireo rehetra mijaly, ireo ambavahoanan’ny fahafatesana, ho an’ny mpanota, ho an’ireo rehetra mijaly ao amin’ny afo fandiovana sy ireo rehetra manao asa na vavaka ho fanonerana ny fahotana, ho fiadiana amin’ny herin’ny ratsy.
SABOTSY : ho fanonerana amin’ny alalan’ny fo madion’i Maria, sy izay ananantsika dévotion manokana…
ALAHADY : ho an’ny fianakaviana, ny paroasy misy antsika, ho an’ny tanindrazana, ho an’ny fandriam-pahalemana sns…
Ohatra ihany ireo nomena antsika ireo fa anjarantsika no mandanjalanja sy mandahatra arak’izay hanentanan’ny Fanahy antsika. Anjarantsika no manokatra ny fontsika ho an’ny filan’ny Fiangonana sy izao tontolo izao.
Misy amintsika ny manana fotoana malalaka hivavahana, tsara izany satria ny vavaka dia mila fotoana maharitra. Isika mpitondra am-bavaka dia tsy maintsy manana 30 minitra fara-fahakeliny hivavahana isan’andro satria sarobidy loatra ity andraikitra sy adidy ity.
Eto am-pamaranana ary dia mankahery anareo ao anatin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka aho mba hanao araka ny fahalalaham-ponareo ity iraka sy antso iantsoana anareo ity. Satria ny vavaka mahery sy maharitra no afaka hanova ny zava-misy iainantsika izao. Ny vavaka mahery sy maharitra no afaka hitondra izao tontolo izao hiaraka amin’Andriamanitra.
Hitso-drano anareo anie Andriamanitra.